FMFP: manofana mpiasa mikendry sy manamafy ny fahaiza-manao | NewsMada
FMFP: manofana mpiasa mikendry sy manamafy ny fahaiza-manao
Ny 15 oktobra teo, tao amin’ny AFD (Agence française de développement) eo Ambohijatovo, nanolarana ho an’ny FMFP (Fonds Malgache de Formation Professionnelle) 8 miliara ariary avy
amin’ny Vondrona eoropeanina (UE). Famatsiam-bola hoenti-manatevina ny fanofanana mpiasa any amin’ny orinasa.
Mitombo isan-taona ny tanora tonga eo amin’ny tsenan’asa. Ary na mitombo aza ny sehatra tsy miankina (+ 5 % tamin’ny 2018), betsaka ny tanora tsy an’asa na ratsy asa, sahirana ny orinasa vao mahita ampy fahaizana mampandeha ny raharaha. Mibahan-toerana ny «fanofanana an-tselika» ami­na sehatra maro. Matetika mahafeno ny banga amin’izay tsy fahampian’ny fahaizana izay ny orinasa vaventy, saingy tsy hita any amin’ny orinasa madinika sy salantsalany (PME).
Koa eo ny FMFP najoro tamin’ny 2018, nahazo 6 tapitrisa euros avy amin’ny Fran­tsay, amin’ny alalan’ny AFD, manofana momba ny asa miaraka amin’ireo mpiara-miombon’antoka, fikambanana so­lontenan’ny mpampiasa sy ny mpiasa ary ny fanjakana. No­hamafisin’ny UE izany, nahazoana 8 miliara ariary izao ho fanofanana mikendry sy ma­namafy ny fahaiza-manao eto Madagasikara, ahafahana ma­hazo ireo tolotra vaovao sy manatsara ny fifaninanana eo amin’ny samy orinasa.
Ny FMFP, mampivoatra ny orinasa sy mampihodina ny toekarena malagasy ; mampitombo sy manohy ny fanofanana ; mametraka ny rafitra fitantanana mpiasa ao anatin’ny orinasa ; mampiroborobo ny asa ho an’ny olona sahirana sy mikendry ny fahitan’ny tanora asa. Nanomboka ny fanofanana ny FMFP, ny taona 2019 ka ny telovolana voalohany 45 % ny orinasa nandrotsa-bola amin’ny fandraisana anjara. 12 159, nahazo fiofanana (40 % vehivavy, 5 % tanora niomana hiasa voalohany), 43 098 ora nampiofanana.
Anisan’ny voakasika amin’ izao tetikasa izao ny sehatry ny fanaovan-damba, teknolojian’ny fifandraisan-davitra sy ny fizahantany. Jerena manokana ny hanohanana ireo mpiasa any amin’ny orinasa madinika. Ny fandaharanasa Padeir (1), mitaky fahaiza-ma­nao any amin’ireo orinasa mpanondrana entana sy fa­metrahana masoivoho iray ho an’ny fanondranana entana na Apex (2).
Padeir (1) : Programme d’appui au développement des exportations et à l’intégration régionale
Apex (2) : Agence de promotion des exportations